မိန်းကလေးကျောင်းတက်ဖူးသူများသာ သိနိုင်တဲ့ခံစားချက်များ - For her Myanmar
ကြိုက်ဖူးတဲ့ အချစ်တော်လေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်မလား။ မညာချင်စမ်းပါနဲ့ကွာ 😛
ဟိုးငယ်ဘဝကို တမ်းတမ်းတတနဲ့ ပြန်တွေးကြည့်ရင် တလွဲအမှတ်တရတွေက ခပ်များများရယ်။ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းဆိုတော့ ဘာမှလည်းမသိ၊ အထူးသဖြင့် ကျောင်းတက်တုန်းက အမှတ်တရတွေဆို ပိုပြီးတော့တောင် ရယ်စရာကောင်းသေးတယ်။ နှင်းတို့ ဟိုးကျောင်းစတက်ကာစ အရွယ်ကတည်းက နာမည်ကြီးမိန်းကလေးသီးသန့်ကျောင်းမှာ တက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ခံစားချက်လေးတွေကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီခံစားချက်တွေကလည်း မိန်းကလေးသီးသန့်ကျေင်းတက်ဖူးတဲ့လူတွေပဲ သိနိုင်တာမဟုတ်လား….
ထဘီစွန်တောင်ဆွဲပြီး ကျောင်းပတ်နေတဲ့ ဂန်းစတားဆန်ဆန် ကောင်မလေးအုပ်စုကို တွေ့ဖူးချင်လား? ကျောင်းမှာလာချောင်းကြည့်ပါ 😛 ဒီလမ်းသွားလည်း ဒီမျက်နှာ၊ ကျောင်းရဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အပိုင်းကိုသွားသွား ဒီမျက်နှာတွေပဲ မြင်နေရတာဆိုတော့ အင်္ကျီကြယ်သီးပြုတ်နေလည်း ဂရုမစိုက်၊ ထဘီချိတ်ပြုတ်နေလည်း အစဆွဲပြီး လျှောက်သွားရုံပဲလေ။ ဘယ်သူမှလည်း ကိုယ့်ကိုမကြည့်သလို ကိုယ်ကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ လိုက်ကြည့်နေတာမှမဟုတ်တာ 😛 (အမယ် ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ အချေ့တော်နားဖြတ်လျှောက်သွားရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ ငိငိ။)
(၂) ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျားလျာလေးတွေရှိတယ်
ယောက်ျားလေးစတိုင်နဲ့ ကောင်မလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ကိုယ်နေကြသေးတာ။ မိန်းကလေးမျက်နှာပေါက်ချောချောလေးကို ယောကျာ်းပုံစံပြောင်းထားရင် ဘယ်လောက် စွဲမက်ချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မှာပါ။ တခြားယောက်ျားလေး မိန်းကလေးရောထားတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ယောက်ျားလျာလေးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ မိန်းကလေးကျောင်းက အုပ်စုလေးတွေလောက် ရဲတင်းသွက်လက်ချစ်စရာကောင်းမယ်မထင်ပါဘူး (ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တာလည်းဖြစ်မှာပါ 😛 ) အဲဒီအချိန်တုန်းက သူတို့လေးတွေ အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီး ကျောင်းပတ်လို့ကတော့ ချောင်းကြည့်ရတာအမော။
Related Article >>> လက်ထပ်ခြင်းက အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့လား
(၃) အချစ်တော် ဇာတ်ရှုပ်လေးတွေက တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရဘူး။
မိန်းကလေးကျောင်းမို့ ရည်းစားထားတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမထင်နဲ့နော်။ အမယ် မိန်းကလေးအချင်းချင်းအချစ်တော်ထားတယ် ဆိုတာရှိတယ်။(အိုင်တို့အဖွားခေတ်ကတည်းက ဒါမျိုးရှိတာတဲ့) နောက်ပြီး အချစ်တော်ထားတယ်ဆိုတာကလည်း လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာထက် စိတ်ကစားစ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အရွယ်မှာ ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာ ဒီလိုပုံတူပွားလေးတွေကို စိတ်ညွတ်သွားတာမျိုးလောက်ပဲ။ (တကယ်ကို တည်မြဲသွားတဲ့လူတွေလည်း ရှိပေမဲ့ တော်တော်များများကတော့ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန် နဂိုပုံစံပြောင်းသွားပြီး အိမ်ထောင်တွေဘာတွေ ကျသွားတာမျိုးတောင် ရှိတယ် :P)
Related Article >>> ဆွဲဆောင်မှု ရှိအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ?
နှင်းကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာလည်းမတော်ဘူး၊ ရုပ်ကလေးကလည်း ဘဲဥပုပ်ဆိုတော့ ကျောင်းမှာထင်ပေါ်နေတဲ့အထဲ မပါခဲ့တော့ ဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်သလို ဘယ်သူကမှလည်း လာမပြိုင်။ ၅ တန်းကတည်းက ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ ကျူရှင်အတူတက်လာတော့ ဇနဲ့ပြောရဲဆိုရဲ ရပ်ကွက်သူဆိုတော့ ဘယ်ကောင်လေးကမှလည်း ကဒီးကဒါးလာမလုပ်ရဲ။
ဒါပေမဲ့ ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတော့ရှိတယ်။ တွဲလည်းတွဲဖူးတယ်။ (ကလေးက ကိုယ့်ထက်ငယ်တယ်။ အစစအရာရာလည်း တော်တော်ကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးပါ။) အခုတော့မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူးလေ။ ခုလောက်ဆိုသူလည်း မိန်းကလေးပြန်ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေလောက်ပြီပေါ့ :P။ ဒီလိုပါပဲ အမှတ်တရလေးတွေတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့ အယ်လဲ့။ ယောင်းတို့လည်း အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက အမှတ်တရလေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ကွိုကျဖူးတဲ့ အခဈြတျောလေးတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျမလား။ မညာခငျြစမျးပါနဲ့ကှာ 😛
ဟိုးငယျဘဝကို တမျးတမျးတတနဲ့ ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ တလှဲအမှတျတရတှကေ ခပျမြားမြားရယျ။ ငယျတုနျးရှယျတုနျးဆိုတော့ ဘာမှလညျးမသိ၊ အထူးသဖွငျ့ ကြောငျးတကျတုနျးက အမှတျတရတှဆေို ပိုပွီးတော့တောငျ ရယျစရာကောငျးသေးတယျ။ နှငျးတို့ ဟိုးကြောငျးစတကျကာစ အရှယျကတညျးက နာမညျကွီးမိနျးကလေးသီးသနျ့ကြောငျးမှာ တကျခဲ့ရတာဆိုတော့ ခံစားခကျြလေးတှကေလညျး ထူးထူးဆနျးဆနျးလေးတှပေေါ့။ နောကျပွီး ဒီခံစားခကျြတှကေလညျး မိနျးကလေးသီးသနျ့ကငျြေးတကျဖူးတဲ့လူတှပေဲ သိနိုငျတာမဟုတျလား….
ထဘီစှနျတောငျဆှဲပွီး ကြောငျးပတျနတေဲ့ ဂနျးစတားဆနျဆနျ ကောငျမလေးအုပျစုကို တှဖေူ့းခငျြလား? ကြောငျးမှာလာခြောငျးကွညျ့ပါ 😛 ဒီလမျးသှားလညျး ဒီမကျြနှာ၊ ကြောငျးရဲ့ ဘယျနရော ဘယျအပိုငျးကိုသှားသှား ဒီမကျြနှာတှပေဲ မွငျနရေတာဆိုတော့ အင်ျကြီကွယျသီးပွုတျနလေညျး ဂရုမစိုကျ၊ ထဘီခြိတျပွုတျနလေညျး အစဆှဲပွီး လြှောကျသှားရုံပဲလေ။ ဘယျသူမှလညျး ကိုယျ့ကိုမကွညျ့သလို ကိုယျကလညျး ဘယျသူ့ကိုမှ လိုကျကွညျ့နတောမှမဟုတျတာ 😛 (အမယျ ကိုယျကွိုကျနတေဲ့ အခတြေ့ျောနားဖွတျလြှောကျသှားရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့ ငိငိ။)
(၂) ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ယောကျြားလြာလေးတှရှေိတယျ
ယောကျြားလေးစတိုငျနဲ့ ကောငျမလေးတှကေလညျး ကိုယျ့အုပျစုနဲ့ကိုယျနကွေသေးတာ။ မိနျးကလေးမကျြနှာပေါကျခြောခြောလေးကို ယောကျြားပုံစံပွောငျးထားရငျ ဘယျလောကျ စှဲမကျခငျြစရာကောငျးတယျဆိုတာ မွငျဖူးတဲ့သူတှပေဲ နားလညျနိုငျမှာပါ။ တခွားယောကျြားလေး မိနျးကလေးရောထားတဲ့ ကြောငျးတှမှော ယောကျြားလြာလေးတှရှေိတယျဆိုပမေဲ့ မိနျးကလေးကြောငျးက အုပျစုလေးတှလေောကျ ရဲတငျးသှကျလကျခဈြစရာကောငျးမယျမထငျပါဘူး (ကိုယျ့ငါးခဉျြ ကိုယျခဉျြတာလညျးဖွဈမှာပါ 😛 ) အဲဒီအခြိနျတုနျးက သူတို့လေးတှေ အုပျစုလိုကျဖှဲ့ပွီး ကြောငျးပတျလို့ကတော့ ခြောငျးကွညျ့ရတာအမော။
Related Article >>> လကျထပျခွငျးက အသကျအရှယျနဲ့ မဆိုငျဘူးတဲ့လား
(၃) အခဈြတျော ဇာတျရှုပျလေးတှကေ တဈနတေ့ဈမြိုးမရိုးရဘူး။
မိနျးကလေးကြောငျးမို့ ရညျးစားထားတဲ့ပွဿနာမရှိဘူးမထငျနဲ့နျော။ အမယျ မိနျးကလေးအခငျြးခငျြးအခဈြတျောထားတယျ ဆိုတာရှိတယျ။(အိုငျတို့အဖှားခတျေကတညျးက ဒါမြိုးရှိတာတဲ့) နောကျပွီး အခဈြတျောထားတယျဆိုတာကလညျး လိငျတူခငျြးစိတျဝငျစားတယျဆိုတာထကျ စိတျကစားစ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျကို စိတျဝငျစားတဲ့အရှယျမှာ ကိုယျနဲ့နီးစပျရာ ဒီလိုပုံတူပှားလေးတှကေို စိတျညှတျသှားတာမြိုးလောကျပဲ။ (တကယျကို တညျမွဲသှားတဲ့လူတှလေညျး ရှိပမေဲ့ တျောတျောမြားမြားကတော့ ကြောငျးပွီးသှားတဲ့အခြိနျ နဂိုပုံစံပွောငျးသှားပွီး အိမျထောငျတှဘောတှေ ကသြှားတာမြိုးတောငျ ရှိတယျ :P)
Related Article >>> ဆှဲဆောငျမှု ရှိအောငျ ဘယျလိုနရေမလဲ?
နှငျးကတော့ ငယျငယျလေးကတညျးက စာလညျးမတျောဘူး၊ ရုပျကလေးကလညျး ဘဲဥပုပျဆိုတော့ ကြောငျးမှာထငျပျေါနတေဲ့အထဲ မပါခဲ့တော့ ဘယျသူနဲ့မှမပွိုငျသလို ဘယျသူကမှလညျး လာမပွိုငျ။ ၅ တနျးကတညျးက ယောကျြားလေးတှနေဲ့ ကြူရှငျအတူတကျလာတော့ ဇနဲ့ပွောရဲဆိုရဲ ရပျကှကျသူဆိုတော့ ဘယျကောငျလေးကမှလညျး ကဒီးကဒါးလာမလုပျရဲ။
ဒါပမေဲ့ ကွိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ ကောငျမလေးတော့ရှိတယျ။ တှဲလညျးတှဲဖူးတယျ။ (ကလေးက ကိုယျ့ထကျငယျတယျ။ အစစအရာရာလညျး တျောတျောကို ဂရုစိုကျပေးတဲ့ ကောငျမလေးပါ။) အခုတော့မတှဖွေ့ဈတော့ပါဘူးလေ။ ခုလောကျဆိုသူလညျး မိနျးကလေးပွနျဖွဈရငျ ဖွဈနလေောကျပွီပေါ့ :P။ ဒီလိုပါပဲ အမှတျတရလေးတှတေော့ ရှိခဲ့ပါတယျပေါ့ အယျလဲ့။ ယောငျးတို့လညျး အထကျတနျးကြောငျးတုနျးက အမှတျတရလေးတှေ မြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော။
Tags: childhood, Feelings, girls, highschool, school
ကွန်ပျူတာမဝယ်ခင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ
Hnin Ei Oo October 19, 2018
ကျောင်းစတက်မယ့် သားသားမီးမီးတွေ ကျောင်းနေပျော်စေဖို့ နည်းလမ်း(၆)သွယ်
Aye Mon Kyaw May 22, 2019